250 Stihl MS: ukubuyekezwa, Ukucaciswa
inkampani Stihl eyaziwa emakethe njengoba nje inkampani ye okunokwethenjelwa futhi ithele ngemishini yokusaha. Abaklami German bakwazile ukuhlanganisa ukusebenza nge Ergonomics namandla eziphakemeyo, kepha ungakhohlwa mayelana nezidingo zokuphepha eliphezulu insimbi. Kuqinisekisa lokhu imodeli Stihl 250 I-MS, okuzoxoxwa kamuva esihlokweni. Lo mshini kufanelekile ukusebenza imisebenzi ukwakhiwa kanye ukusebenzisa kwangasese, ezifana umsizi ngemisebenzi engadini noma izinkuni.
ulwazi olujwayelekile mayelana imodeli
Imodeli sikhombisa isibonelo inhlanganisela ngempumelelo isisindo ukukhanya namandla eliphezulu. Ikhwalithi lokuqala inquma lula ukusetshenziswa chainsaws, kanti owesibili ikuvumela ukuba sisisebenzise Imi izihlahla ezincane kanye namagatsha obukhulu. Maneuverability futhi compactness ibuye inikeze ithuba ukuzibona izingadi ukusula kwamafindo owengeziwe. Ngesikhathi esifanayo Stihl MS 250 apharathasi kuyinto ngempela usesikhathini ngokuya ukwesekwa kwezobuchwepheshe. Abaklami wanika imodeli uhla lwezindawo ongakhetha ongadalwa ezihluthulelwe ukuphepha, ukwethembeka namakhono sokusebenza. Yiqiniso, ukugcwalisa amandla lokhu ukuguqulwa awukwazi ukuncintisana nge chainsaws agcwele professional, kodwa injini yayo awunankinga yokwenze sawing izinkuni impahla ngoba ejwayelekileyo jikelele.
Okokuqala-ke Kuyaphawuleka ukuthi imodeli iza izinguqulo ezimbili - nge obuphelele ibhasi kuka-14 no-16 amasentimitha. Kukho konke, umenzi uthi nemingcele okufanayo izinguqulo ezihlukene Stihl MS 250. Izimfanelo iyunithi zimi kanje:
Amandla ezingaba - 3.1 hp
Amandla - 2.3 kW.
Lokufuduka - 45.4 m 3.
Tank umthamo for uphethiloli - 0,47 amalitha.
Umthamo ethangini ngamafutha - 0.2 amalitha.
Noise Inkomba - 111 dB.
Ububanzi inkatho yochungechunge - 1.3 kwangu.
Isibalo izixhumanisi iketango - 55.
ezihluthulelwe Mass - 4.6 kg.
Lezi idatha ayivezi isithombe egcwele ithuluzi isiJalimane, ngoba eziningi zezinzuzo kuphela sobala ngesikhathi ukusebenza. Ngokwesibonelo, nabaqambi ozinikezele carburetor sasivumela ephumelelayo, okuyinto libhekene ongaphakeme petrol. Leli phuzu esifanelana nomqondo Chainsaw wosayizi omncane ezinezici elungiselelwe.
Iyunithi unikezwa compensator ekhethekile umsebenzi okuyinto iwukuhlale njalo amandla ezingeni. Kungakhathaliseki lemifanekiso air ukungcola, lesi simiso ikuvumela ukuba alondoloze ikhwalithi qeda kuhambisana ukusetshenziswa kukawoyela. By the way, ukulungisa Stihl MS 250 kaningi phezu le ngxenye, okuyinto ixhunywe nje ne odla zokuhlunga.
Nweba ukuphila iyunithi kuzosenza yokuhlanza we ulwelwesi emoyeni. Ngokuvamile, lo msebenzi wenziwa uma iconsi sína amandla kwenzeka. Liphinde ifakwe preheating Chainsaw carburetor. Lokhu kwalokho kubalulekile ikakhulukazi ebusika. Idivayisi ihlinzeka Ukuhamba efudumele ukuncela komoya, ekuqedeni ingozi Uqweqwe. Nokho, khumbula mayelana ukushintsha ukusebenza nge uthule kwathatha ehlobo yokusebenza sonyaka. Kuhle kokusho futhi uyavikela uchungechunge ukubopha indlela, okuyinto kweso okuvimba ukunyakaza yochungechunge emva ngokuchofoza ukugcizelelwa ngokukhethekile.
Esinye sezici ezivelele kunazo futhi ewusizo we imodeli uhlelo anti-vibration. iyehla iyenyuka oqinile ukusebenza ngemishini yokusaha - inkinga evamile, ngenxa ezizenzile izandla ngokushesha ukhathele. Kulokhu, injini idluliselwa ku isibambo lincishisiwe umphumela vibratory ukuthi kwenza kube lula ukuba enze umsebenzi imisebenzi. Kalula Isicelo kusiza inhlangano Single ukulawula isigwedlo. Onjiniyela udale ezosetshenziswa nokuxhumana isaha Stihl 250 MS, lapho bonke imiyalelo eziyisisekelo abathola isahlulelo ngumuntu isigwedlo olulodwa. Okunye okuphawulekayo yilokho ohlelweni Ematic obhekene Lubrication wesifunda. Le divayisi uhlobo a nentaba ngesimo isondo ukugeleza lapho uwoyela uthunyelwa neketango oluneziqhingi.
Ukuze uthuthukise Ergonomics lenkampani sihlinzekela ukunikezelwa imodeli okusheshayo tensioning uhlelo. izindlela ezinjalo wadabula izigaba eziningana ukuthuthukiswa lobuchwepheshe, futhi namuhla ukuba ulungise iketango alikhulumi nanokukhuluma ezidinga ukusetshenziswa amathuluzi akhethekile.
Stihl Model 250 MS kulekelelwa ekhethekile nut ingxenye ku ilungiselelo sprocket. Ngu aphethe lo ucezu, umsebenzisi athambise noma qinisa ibhasi ukusebenza ngokuhambisana nezidingo izenzo ukusebenza. Ngaphezu kwalokho, inkampani inikeza ElastoStart uhlelo ngawo uvinjelwe ezehlela bonke yokusaha ukuzamazama ekuqaleni. Njengoba umkhuba ubonisa, umthelela onjalo emalungeni amandla sindisa ukusebenza, esikhathini eside run phambili ekuthuthukiseni izifo. Ngakwelinye ihlangothi, inhlamvu ElastoStart ukunciphisa imiphumela elimazayo ngenxa isici Damping isibambo.
Baningi nakho okuhle umsebenzisi, lolu phiko ngenxa Ergonomics okusezingeni eliphezulu, okuyinto kulekelelwa ubuchwepheshe zokusiza. isayizi esincane, design umsebenzisi-friendly of izibambo nezilawuli ezitholakala vibration ukunciphisa indlela - bonke abanikazi uyayifaka yini plus. Ngokuya ukusebenza, yebo, lindela imodeli alesi sigaba wamandla okusezingeni eliphezulu nomthelela futhi akudingekile, kodwa kule ingxenye ke siyindlela ehlonipheke kakhulu. Ngokwesibonelo, kukhona kalula izingodo sawing, okungaba kalula Stihl MS 250. Uphenyo petrol kanye nokuntuleka ukugxekwa.
Singasho ukuthi abaklami ichashazi yokusondela tinhlangotsi letehlukene ekusebenzeni chainsaws njengoba enjalo, futhi esimweni mthandazo oyisibonelo, wazama ukunciphisa ezintweni ezingezinhle. Ngenxa yalokho, njengoba okuhlangenwe nakho yomsebenzisi, sesimanje okwabonwa kuhlulekile ngezindlela eziningi.
Kukhona ubuthakathaka iyunithi. Phakathi kwezinkinga ezivame waphawula ngangingabaza nokuqala. Futhi likhuluma ngokuqondile ukuqalisa le Chainsaw, okuyinto has ukwenza eziningi ngaphezu kwesikhathi esisodwa. Kodwa ekuqaleni ashisayo akakubangeli izikhalazo. Kuyaphawuleka izinto ukuntuleka kwazo lihlotshaniswa isingeniso esihlulekile ubuchwepheshe obusha. Wathi kukawoyela uhlelo wayezelwe njengendlela nokwandisa ukugeleza igrisi. Ngokuvamile, ukuthi isebenza kahle, yokudla olinganiselayo ketshezi. Nokho, kwezinye izimo, ukusebenza imakwe inkinga nge isondo uwoyela isiqondiso, ehlinzekwe nge Chainsaw Stihl MS 250. Uphenyo inothi yokuthi amafutha iza kancane kakhulu, asikho isikhathi sokukhululeka kahle inqubo chain.
Umenzi isiJalimane Positioning ukuthuthukiswa yayo njengoba umkhiqizo zobuchwepheshe ngemisebenzi ezibanzi amandla olinganiselayo. Ngokwengxenye enkulu, umkhuba usebenzisa le imodeli kuqinisekisa kulezi zici. Ikakhulukazi uma ucabangela iqiniso lokuthi Chainsaw Stihl MS 250 itholakala emakethe i isilinganiso ayizinkulungwane 27-30. Hlikihla. Ukuze iyunithi ezinkampani nge qualitative isici isisekelo, amandla egcwele eshukumisa futhi ubuchwepheshe obusha akuyona kakhulu. Yiqiniso, imodeli zaphumela hhayi ngaphandle nemiphumela ethile engathandeki. Abanikazi Chainsaw inothi amaphutha amancane e ukusetshenziswa idivayisi, kodwa ngokuvamile le ndlela idinga ukunakwa abaphathi kanye nezifundiswa nekhaya sezingcweti.
Isikimu ishaja ngokuba screwdriver. Umdwebo wokuhlelwa kwendikimba ukushaja idivayisi ukufakwa kokumqoka kuphela
Indlela ukuxhuma umshini wokuwasha bebodwa
Ukuvikelwa imishini yokuwasha kusuka esikalini noma ukuvuza
Amaphampu okuzenzakalelayo: i-scope ne Umgomo we operation
IStabilizer bushing polyurethane: isicelo kanye nokubuyekeza
Izwe organic we-Indian Ocean. Indian Ocean cwaningo
-hemoglobin okuphansi ezingabantu: Izimbangela, izimpawu kanye nezici ukwelashwa
I sihloko ezithakazelisayo ukuze inkulumo ukuze izethameli
Stone baking: ukuthi kuyini nokuthi ungayisebenzisa kanjani
Canberra - dolobha yase-Australia. Canberra ezikhangayo
Ukubeka aerocrete izandla siqu: imigqa yokuqala, izici nencazelo ubuchwepheshe
Sibhedlela "Dubki" (nge Undory, Ulyanovsk esifundeni, Ulyanovsk esifundeni.): Incazelo kanye nokubuyekeza
Isifo umbandamu e ingane: izimpawu, ukwelashwa kanye nokuvimbela izindlela
"Ukhilimu Skinoren" - izinkomba ukusetshenziswa
Ukubhaliswa lokuhweba: isicelo, izindleko, isikhathi kanye nenqubo
Kungani kusihlwa ngemva kushisa kukhona amazolo? I timo letisisekelo ivela khona